၂၁ ဧပြီ၊ ၂၀၁၈
FILE - The crew of the U.S. Coast Guard Cutter Healy, in the midst of their ICESCAPE mission to study sea ice, retrieves supplies in the Arctic Ocean, July 12, 2011.
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Tip of the iceberg, Play chicken နဲ့Play with fire တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Tip of the iceberg
Tip of (ထိပ်ဖျားရဲ့ )၊ the iceberg (ပင်လယ်ပြင်မှာ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီး) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ပင်လယ်ပြင်မှာ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးရဲ့  ထိပ်ဖျားပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာရဲ့  အအေးပိုင်းဇုန်တွေမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးတွေဟာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အကယ်ဒမီဆုရ Titanic ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၁၉၁၂ ခု၊ ဧပြီလမှာ မြောက်အတ္တလန်တိတ် ပင်လယ်မှာ ဗြိတိသျှဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီး Titanic ကို ပထမဦးဆုံး ရေချတဲ့ခရီးစဉ်မှာ၊ ရေခဲတုံးကြီိးနဲ့ တိုက်မိလို့ သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးကို မျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့ရတာ ထိပ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ပြင်အောက်မှာနစ်နေပြီးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းကအဆပေါင်းများစွာကြီးလှတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tip of the iceberg ရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က တွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာက သိပ်မကြီးဘူးလို့ ရုတ်တရက် ထင်ရပေမယ့်၊ နောက်မှာ တနွယ်ငင် တစင်ပါ ဆိုသလို ဧရာမပြဿနာကြီး ရှိနေတာ၊ မမြင်နိုင်၊ မသိနိုင်သေးတဲ့ ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနေတာ၊အခြေအနေဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုဆိုးနေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း မျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာက အမြည်းသဘောလောက်ပဲ ရှိနေသေးတာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို လက်ရှိ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အကြား သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်တွေအပေါ် အပြန်အလှန် အခွန်ငွေတွေ တိုးကောက်နေတာကြောင့် အချိန်ကြာပြီး နက်နဲခက်ခဲမယ့် ကုန်သွယ်ရေးစစ်အသွင် ဖြစ်လာဖို့က ဒါဟာ အမြည်းသဘောပဲ ရှိအုံးမယ်ဆိုပြီး CNBC သတင်းဌာနက China tariffs could be “tip of the iceberg” in an entrenched trade war ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
The evidence the police found so far on the minister’s corruption case was just tip of the iceberg.
ဝန်ကြီးအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရဲက အခုထိ တွေ့ထားတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေဟာ အမြည်းသဘောပဲ ရှိသေးတယ်။
Play (ကစားတာ)၊ chicken ဒီနေရာမှာ ကြက်ကလေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ဘဲ၊ သူရဲဘောကြောင်တာ သတ္တိနည်းတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက သတ္တိကြောင်ပြီးနောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ လောင်းကြေးစားကြေး စိန်ခေါ်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က သတ္တိရှိ၊ မရှိကို လောင်းကြေးစားကြေးလုပ်ပြီးမိုက်ရုးရဲယှဉ်ပြိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Chicken game ဆိုတဲ့ လောင်းကြေးစားကြေး သတ္တိပြိုင်ပုံကတော့ ကားနှစ်စီးဟာ တစီးနဲ့တစီး ဦးတည်မောင်းပြီး၊ နောက်ဆုံး တိုက်ခါနီးမှာ ဘယ်သူက သူရဲဘောကြောင်ပြီးရင်မဆိုင်ရဲတော့လို့အရင်ရှောင်ထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ မိုိုက်ရုးရဲသတ္တိယှဉ်ပြိုင်မှုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကအန္တရာယ်ဖြစ်မယ့်ဘေးကို ကြောက်ပြီး ဘယ်သူကစ အရှုံးပေးမယ်ဆိုတာကို သွေးတိုးစမ်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အကြား သွင်းကုန်-ပို့ကုန်တွေအပေါ် အပြန်အလှန် အခွန်ငွေတွေ တိုးကောက်နေကြရာမှာ ဘယ်သူကစ လက်မြှောက်အရှုံးပေးပြီး နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတာကို ပြိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပေမယ့်လို့လဲ နှစ်နိုင်ငံစလုံးကတော့ အခုထက်ထိ ရှောင်ထွက်မသွားသေးဘူးဆိုပြီး New York Times သတင်းစာကြီးက US and China “play chicken” on trade, and neither swerves လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
It’s foolish to play chicken as you will only end hurting yourself.
သတ္တိရှိတာကိုပြဖို့မိုက်ရုးရဲ ယှဉ်ပြိုင်တာဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ အဆုံးမှာ ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။
(3) Play with fire
Play (ကစားတာ)၊ with fire (မီးနဲ့) ဖြစ်ပြီး စကားတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မီးနဲ့ ကစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူမျိုး (၅) ပါးမှာ ပါဝင်တဲ့ မီးဟာ လူ့အတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် မီးနဲ့ ကစားတယ် ဆိုကတည်းက အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ဒီ အီဒီယံရဲ့  သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အန္တရာယ် ရှိစေနိုင်တာ၊ ထိခိုက်စေနိုင်တာ၊ ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တာကို သွားပြီး မထိတထိ၊ ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ပြီးခဲ့တဲ့လက ဗြိတိန်မှာ ရုရှနှစ်ဘက်သူလျှိုဟောင်း Sergei Skripal နဲ့ သူ့သမီး အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့နဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရုရှားအစိုးရ လက်ချက်မကင်းဘူးလို့ ဗြိတိန်က စွပ်စွဲခဲ့ပြီး သံတမန်တွေကိုလဲ နှင်ထုတ်မှုတွေ ပြုလုပ်တာခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ရာမှာ ရုရှားသံအမတ်ကြီးက ဒီလိုလုပ်တာဟာ Playing with fire မီးနဲ့ကစားရာရောက်တယ်လို့ ဗြိတိန်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် The Times of Israel သတင်းစာကြီးက Russia says Britain is “playing with fire” in spy case ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John, you will be playing with fire if you both drink and gamble.
John ရေ၊ ခင်များ အရက်လည်းသောက်၊ လောင်းကစားလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်မယ့်ကိန်းဆိုက်လိမ့်မယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Tip of the iceberg, Play chicken နဲ့Play with fire တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။